आज Drywall प्रयोग Cladding आफ्नो unpresentable मात्र भित्री बिगार्छ त्यो कोठा मा थर्मल र ध्वनिक गुण सुधार गर्न सबैभन्दा किफायती र तेज बाटो देखिन्छ र संचार सफलतापूर्वक लुकाउन (पाइप, ताराहरु र यति मा।)। यो काम को यस प्रकारको व्यवसायीक को मद्दत बिना आफ्नै सामना गर्न एकदम सम्भव छ भनेर टिप्पण लायक छ। र हाम्रो सिफारिसहरू पढेपछि यो पक्कै पनि सफल।
तपाईंले सुरू गर्नु अघि, तपाईं उपलब्ध सबै आवश्यक, अर्थात् छन् भनेर पक्का:
Drywall को 1 पाना, धातु प्रोफाइल, dowels, स्क्रू।
2. पहेली वा Drywall काटन लागि चक्कु।
3. भवन कर्ड, plumb, स्तर, भद्दा मुद्दा।
4 पेन्सिल, मार्कर वा अंकन लागि चक।
7 कैंची धातु काटन।
plasterboard को पर्खालहरु कसरी sheathe गर्न: लेआउट गर्न
साहुल समातिरहनु वा माध्यम द्वारा पर्खालहरु को लेआउट आत्मा स्तर। यो एक आवश्यक सतह को फैलएको अंश निर्धारण गर्नेछ जो, चढाना अघि कदम हो। कदम तल्ला मा फेला स्थानहरू निशान। एक चिल्लो पर्खाल परिणाम गर्न, दुई भन्दा प्रमुख मार्कर बीच सिधा रेखा। दोस्रो लाइन पहिलो संग समानान्तर मा आयोजित हुनुपर्छ, र5मिमी को एक दूरी प्लस धातु प्रोफाइल को चौडाई मा (यू आकारको)। यो लाइन को लागि छ र तपाईं प्रोफाइल समाधान गर्न छ। छत गर्न दोस्रो स्थानान्तरण को साहुल समातिरहनु संग।
plasterboard को पर्खालहरु कसरी sheathe गर्न: एक धातु प्रोफाइल माउन्ट
लम्बाइ गर्न प्रोफाइल कटौती, र त्यसपछि पर्खाल संलग्न हुन्छन्। माउन्ट सामान्यतया एक सेट रूपमा बेचिन्छ जो dowels र "पहेंलो" काठ शिकंजा (द्रुत स्थापनाको लागि), द्वारा बाहिर छ। तर एडोब र काठ पर्खालहरु धातु प्रोफाइल सुरक्षित र सामान्य "कालो" आत्म-ट्याप स्क्रू हुन सक्छ।
प्रोफाइल हरेक 50 सेमी प्वालहरू व्यास7मिमी drilled। अगाडि भाग बस तपाईंले पहिले बाहिर चिन्ह लगाइएको जो लाइन, थियो भनेर पर्खाल गर्न रेल संलग्न गर्नुहोस्। पेन्सिल वा मार्कर, तपाईं drilled प्वालहरू को आकृति कोर्नुहोस्। हथौडा ड्रिल वा पर्खाल मा ड्रिल छेद। स्क्रू, dowels वा स्क्रू संग पर्खाल संलग्न प्रोफाइल।
plasterboard को पर्खालहरु कसरी sheathe गर्न: मुख्य फ्रेम माउन्ट
मुख्य फ्रेम प्रोफाइल को प्रयोगको लागि "सी" आवश्यक जिप्सम बोर्ड को जंक्शन मा, ठाउँ niches, विन्डो र ढोका खुलने मा उपस्थित हुनुपर्छ जो -shaped।
मानक पाना चौडाइ (1.2 मिटर) मा डकिंग प्रत्येक जोडी बीच एक प्रोफाइल सेट गर्नुपर्छ। प्रोफाइल बीच दूरी Drywall दुई तहहरू र 40 सेमी यदि 60 सेमी, desirably SHEATHING पर्खाल भने - त्यसपछि हामी दोस्रो तह बिना गर्न सक्नुहुन्छ।
Fastened -shaped प्रोफाइल "सी" "को यू" स्क्रू संग छैन ठ्याक्कै लम्ब -shaped गर्न, तर, र obliquely एक बिट।
फ्रेम, चरणमा गर्न अर्थात् हरेक 1-2 पाना सिफारिस गरिएको छ, र त्यसपछि पनि Drywall कस्नु र थप फ्रेम बनाउन। यो हेरफेर रोक्न सकिएला कारण मापन त्रुटि।
पर्खालहरु मा Drywall स्थापना
सबै पछि, तपाईं पहिले नै यो कदम सजिलो लाग्न सक्छ के गर्न छ। सोझो पाना स्थापना र फ्रेम गर्न संलग्न गर्नुहोस्। यो एक्लै यो के गर्न सबै भन्दा राम्रो छ, तर सँगी को कम से कम एक जोडी। तपाईं Drywall मात्र 2-3 ठाउँ पेंच भने पनि यो पहिले नै अझै पनि यहाँ र दृढ आयोजित तपाईं सूची पर्याप्त हुनेछ। को पेचकस वा प्याडल एक ड्रिल प्रयोग स्क्रू संग कस्नु।
तपाईं बाद को प्रयोग संग, एक चक्कु वा पहेली प्रयोग गरेर पानाहरू को आकार ट्रिम गर्न आवश्यक अघि धेरै कम धूलो सुनिश्चित गर्दछ।
कसरी plasterboard को पर्खालहरु sheathe गर्न: shpatlyuem
Drywall वा shpatlyuem मात्र स्क्रू र जोइन्टहरूमा, वा vsploshnuyu को पानाहरू। यस मामला मा, प्राथमिकताको, विशेषज्ञहरु अनुसार, दोस्रो विकल्प, यो देखि फेला पार्न र हार्ड जर्मनी ले गुणस्तर Drywall किन्न छ। serpyanku - यो अनुदैर्ध्य जोइन्टहरूमा यो जाल reinforcing भन्दा टाँस्न सिफारिस गरिएको छ।
आफ्नो हातमा इँटा बनेको ओवन-बारबेक्यू कसरी बनाउने
उठाएको प्यानल - यो के हो? भान्सा र बाथरूम लागि उठाएको प्यानल
दाता गरेको रूस र संसारभरि दिन। को दाता को दिन मना गर्दा?
बार्सिलोना गरेको तटों - एक अद्भुत छुट्टी स्पेनको barns को किनारा मा